Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Abahlengikazi base-Ontario: Ukukhathazeka Ngengcwaba ngecebo elisha lokuvula kabusha
Uhulumeni wase-Ontario uxwayisa umoya futhi ubeka engcupheni inqubekela phambili eyenziwe yisifundazwe ekugcineni ukubhebhetheka kwegciwane le-COVID-19.
I-Registered Nurses 'Association of Ontario (RNAO) ithi amandla esifundazwe okulawula ukubhebhetheka kokutheleleka njengoba singena ezinyangeni ezibandayo agencwa wuhlelo lokuvula kabusha oluphakamisa imingcele kusukela ngoMsombuluko, Okthoba 25, futhi luqeda. izinyathelo zezempilo zomphakathi - okuhlanganisa nokudinga ubufakazi bokugoma - ekuqaleni kukaJanuwari.
I-RNAO ikhathazeke kakhulu ngokuthi uhulumeni ukhethe ukungakumemezeli ukugoma okuyimpoqo kubo bonke abasebenzi bezempilo kuyo yonke imikhakha nezilungiselelo. Lesi siqondiso sesivele sikhona kulabo abasebenza ekunakekelweni kwesikhathi eside, nomnqamulajuqu wokuthobela ngoNovemba 15. Izibhedlela eziningi zokunakekelwa okuphuthumayo zithatha isinyathelo esifanayo. Kodwa-ke, le ndlela yokusebenzelana nenqubomgomo kahulumeni wakwaFord ishiya iziguli nabasebenzi ezibhedlela eziningi, ukunakekelwa kwasekhaya kanye nezinye izindawo zomphakathi ezingeni eliphezulu kakhulu lokuba sengcupheni uma abasebenzi abangagonyiwe beshiya isilungiselelo esisodwa kwesinye esinezidingo ezithambile.
Ukufuna ukuthi bonke abasebenzi bezempilo nezemfundo bagonywe ngokugcwele kuyinqubomgomo esekelwe ebufakazini, eyaqala ukubizwa yi-RNAO ngoJulayi 2021, futhi muva nje isekelwa iThebula likahulumeni leSayensi. Ukungazinaki iseluleko esinjalo kuphambene nomqondo, kuwukunganaki futhi kubeka engcupheni ukunakekelwa kwesiguli nokuphepha kwabasebenzi.
I-RNAO inxusa abantu ukuthi baqhubeke nokusayina i-Action Alert ifuna uNdunankulu Ford andise imigomo eyisibopho kubo bonke abasebenzi bezempilo nezemfundo futhi basungule izindawo eziphephile ezizungeze izindawo zabo zokusebenza. Inhlangano ithi lezi yizinyathelo ezibalulekile ezidingekayo ukubhekana ngqo ne-COVID-19.